थारु आन्तरिक औपनिवेशको शिकार हैन, मुक्ति चाहन्छ - Hamar Pahura
थारु आन्तरिक औपनिवेशको शिकार हैन, मुक्ति चाहन्छ
सोमबार, मंसिर २०, २०७३ ११:२६:४२
हजारौं वर्षदेखि खोला, जंगलको किनारमा जीविकोपार्जन गर्ने हामी थारुले इतिहासमा प्राकृतिक विषम परिस्थिति बेहोर्दै गोही, विषालु सर्प, विच्छि, हाति, बाघ, भालुसँग पैठेजोरी खेल्दै बाँच्न सफल भयौं । मलेरियाको महामारी पनि पचायौं । इतिहासको कालखण्डमा जुन जुन देशको वासिन्दा भएर राजनीतिक रुपमा बाच्नु परेपनि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा योगदान गर्यौं । यी सब भए हाम्रा इतिहास । तर यो पनि सत्य हो कि मलेरिया उन्मुलन पश्चात यहाँ हाम्रा नयाँ छिमेकीहरु आए । अहिलेसम्म छिमेकी प्रतिको भावना तथा छिमेकीत्वको आदर्श हामीले एकतर्फी जोगाउने काम कर्मद्वारा गरेका छौं भन्ने लाग्छ । हाम्रा छिमेकीहरुबाट हामीले कैयन उपलब्धीहरु हासिल गरेका छौं । हामीजस्तै यहाँ अनेकन प्राकृतिक मानवसमुह आफ्नो आफ्नो साँस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिकता तथा ज्ञानपद्धतिअनुसार अस्तित्ववान छन भन्ने बुझ्यौं । फरक फरक आस्था बोकेपनि सबैको शाश्वतसत्य करुणामय छ भन्ने विश्वास पनि जागेर आयो । अहिले पनि सहअस्तित्व कायम गरेर जीवन जिउने काम भइआएकै छ । परेकोबेला एकअर्कालाई साथदिने काम नभएको पनि होइन । अहिले त नातागोता समेत गाँसिएर मानव समाज निर्माण भएको छ । यसलाई अब कसैले भाँजो हाल्ने औकात राख्दैन । त्यसैले त राजनीतिक खेल हामीलाई स्वार्थी बनाउने प्रयत्न गरेपनि अन्ततः हामी मानवताको त्यो उच्चतम अभ्यास पनि गर्न पुग्छौं जहाँ छिमेकीलाई परेको पीडामा मलम लगाउन अग्रसर भएका घटनाहरु साक्षी छन् ।
राजनीतिक खेल हामीलाई स्वार्थी बनाउने प्रयत्न गरेपनि अन्ततः हामी मानवताको त्यो उच्चतम अभ्यास पनि गर्न पुग्छौं जहाँ छिमेकीलाई परेको पीडामा मलम लगाउन अग्रसर भएका घटनाहरु साक्षी छन् ।
हाम्रो छिमेकीलाई थाहा भएकै कुरो हो कि जहाँका हामी बासिन्दा हौं, आदिवासी भएर वाँचेका छौं । हामी आदिवासी नै रहन चाहेका हौं । हामीलाई विश्वास छ, हामी आदिवासीवाद मार्फत निर्देशित भएर यो संसार वदल्न चाहन्छौं । त्यसैले आदिवासीत्वको हामी सच्चा पहरेदार भएर यो धरतीलाई रक्षागर्ने संकल्प गरेका छौं । आदरणीय दाजुभाई, दिदीवहिनीहरु ! आधुनिक नेपाल राज्यमा हामी आवद्ध भएको २५० वर्ष भयो । यस अवधिमा राज्यको अहितमा कहिल्यै काम गरेको प्रमाण छैन । तर सामन्ति राणा–शाहको शासनकालमा यिनै थारुलाई मासिने मतवालीको कित्तामा राखे । नेपालको राज्य प्रणालीमा इतिहासकालदेखि नै खेतीयोग्य जमीन तयार गर्ने यी थारुको स्वाभिमानप्रति शंका भएर नै शासकवर्गले आफ्ना द्वारे, पाले, पुरोहित तथा गुरुहरुको सेवामा ती जमिनहरु बक्सिस तथा जगीरकोरुपमा उपलब्ध गराए । प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको पहुँचबाट हामीलाई बिमुख बनाउने कामभयो । हामीलाई जब पञ्चायती व्यवस्थामा एक भाषा, एक भेषको नीतिमार्फत दमन गरीयो, हाम्रा संवेदना एकाएक तरंगित हुन पुग्यो । हाम्रा परम्परा, प्रथाजनित कानुनहरु लगायत साँस्कृतिक धरोहरमाथि धावा बोल्ने कामभयो र हामीलाई पछौटेपनको सुचिमा राख्ने काम नियोजितरुपमा गरे । केही थारु एलिट्सको स्वार्थ समायोजन गर्दै पञ्चायतकालभरी फुटाउ र राजगरको नीति बमोजिम शासन लादिए भने थारु बाहुल्य क्षेत्रमा जंगल फडानी गर्दै पुनर्वास गराउने कामलाई प्राथमिकता दियो । यसले पनि थारुको अर्थराजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारे ।
थारुले पञ्चायतकालभरी आफू विरुद्ध हुँदैआएको शोषण र जालझेललाई लोकतन्त्रको पुनःस्थापना सँगै समायोजन गरेर संघर्ष चलाए । यसरी ठाउँठाउँमा राजनीतिककर्मीहरु शेल्टर लिंदा उनीहरुको भौतिक साधन जुटाउने काममा खटे । किसानहरु मोहियानीहकको सवाल उठाउँदै संघर्ष गर्दा त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक गतिविधि नै मानिन्थे । यसरी अन्तिम समयसम्म राजनीतिककर्मीलाई साथदिंदै अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल बनाए । तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा समेत थारु अपमानित जीवन कमैया, कमलहरी, बुक्रही भएर नेतागणको घरमा विताउनु पर्यो । बँधुवा मजदुर भई जीवन गुजारा गर्दापनि हामी थारु छिमेकीहरुको मानमर्दन गरेनौं । बरु राजासाहेव, मालिक, माल्किन, हजुर भनेर सम्बोधन गरेको मनमष्तिष्कमा अझै ताजै छ ।
थारु आन्तरिक औपनिवेशिकताको शिकार भएको महसुस पहिले देखि गरिआएकै हो । टीकापुर घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिले अझ यसलाई पेचिलो बनाउने काम गर्यो ।
पहिले हामी भाषिक अधिकारको सवाल उठायौं र राजनीतिबाट धर्म अलग गर्ने विषयसँग एकाकार गर्यौं । तर प्रजातन्त्रमा त्यो पनि संविधानमा उल्लेखित अधिकारको कुरो उठ्दा हामीउपर ज्यादति शुरुभयो । एक दशकपछि श्रावण २ गते वर्षाको समयमा वेघर बनाइएका पीडाहरु पनि छन् । अहिले थरुहट राज्य प्राप्तीको लागि संघर्ष गर्न अग्रसर भयौं जुन हाम्रा छिमेकीहरुलाई असह्य हुँदैछ । यतिबेला छिमेकीहरुले नै हामीलाई विखण्डनकारी देख्न थाल्नुभयो जबकी उहाँहरुलाई थाहा छ कि थारु आफ्नो थातथलोको विषयमा कति गम्भिर छ भन्ने कुरा । थारु अनेकन प्राकृतिक प्रकोपका बाबजुद आफ्नो भाग्य अजमाउन बोर्डर पार गरेनन् न त उनीहरु पहाड नै उक्ले । आफ्नो पूर्खाले गुल्जारगरेको भूमी राज्यको ऐनहरुले खोस्ने काम गरेपनि राज्य विरुद्धको विद्रोह गरेको इतिहास छैन । हो, आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर तत्कालिन माओवादीले उठाएको जनयुद्धमा साथ दिए । हाम्रा छिमेकीहरुलाई यी सबै जानकारी भएकै विषयहरु हुन । अझ थारुको जातीय सफाया गर्ने राज्यको योजना थियो । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात थारुको आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गरेको पनि सत्य हो । अहिले पनि उक्त आन्दोलनहरुमा पाँचजना जीवन आहुति दिईसके भने २०७२ साल भाद्र ७ गते टीकापुर घटनाको आवरणभित्र थारुको जातीय सफाया गर्ने राज्यको योजना नश्लीय राजनीति प्रतिबिम्बित गरे । शायद यसले गणतान्त्रिक नेपालको औपनिवेशिक चरित्रसतहमा ल्याएको भन्न सकिन्छ । थारु आन्तरिक औपनिवेशिकताको शिकार भएको महसुस पहिले देखि गरिआएकै हो । टीकापुर घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिले अझ यसलाई पेचिलो बनाउने काम गर्यो ।
हामी थारु आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौं र अब नेपाललाई वहुलराष्ट्रिय राज्यकोरुपमा परिवर्तन गर्न अन्तिम लडाई गर्न तयार छौं ।
हाम्रा छिमेकी अहिले थारुबाट डराउने र थारु उपरोक्त छिमेकीहरुबाट तर्सिने काम हुँदैछ । व्यक्तिगत रुपमा मेरो विन्ती छ कि हाम्रा छिमेकीहरुप्रति त्यस्तो वैमनष्यता हाम्रो छैन । कुनैवेला छिमेकीले र कुनै वेला हामीले छिमेकीलाई ठेलमठेल गर्दा उहाँहरुको चित्तदुखेको होला । हाम्रो पनि चित्त दुखे होलान् । यो आलेख मार्फत हाम्रा छिमेकीहरुलाई ठेलमठेलकोवेला परेको अन्यायप्रति अथवा आरोप प्रत्यारोपको कारणले हुनपुगेको छिमेकीत्वको उपहासप्रति गम्भिर छलफल गर्न तयार नै छौं । अर्को कुरो छिमेकीको धर्मप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहँदै अगामी दिनमा पनि यसलाई प्रगाढ बनाउने दिसामै हाम्रो योगदान रहनेछ । मेरोतर्फबाट छिमेकीत्व पालना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने संकल्प दोहर्याउन चाहन्छु । यससँगै छिमेकीहरुलाई यो पनि ज्ञात रहोस् कि थारुलाई सधैं उपनिवेशमा राख्ने राज्यको सारभूत आधार भत्काउन जुनसुकै विधि अपनाउन तयार हुनेछौं । आदरणीय दाजुभाई दिदीवहिनीहरु ! हामी थारु आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौं र अब नेपाललाई वहुलराष्ट्रिय राज्यकोरुपमा परिवर्तन गर्न अन्तिम लडाई गर्न तयार छौं । यसबाट फेरि पनि हाम्रा छिमेकीहरुलाई नकारात्मक असर पर्नसक्छ । उहाँहरुप्रति संघर्षकोवेला जान÷अन्जानमा दुव्र्यवहार हुनसक्ला । त्यसलाई स्वभाविकरुपमा लिंदै हाम्रा छिमेकीहरुको हितलाई ध्यान दिने राज्य भएपनि हामी त्यसलाई उल्टाउने अन्तिम कोशिश गर्ने छौं । तर छिमेकीत्वलाई अमर बनाइराख्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आउन दिने छैनौं । लेखनी विसाउँदै छु । बाँकी संघर्षको मैदानबाट जे निर्णय हुन्छ सबैले स्वीकार गरौंला । धन्यवाद ।
(पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष थारु विद्यार्थी समाज)